musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa Boka rinozivisa Nyowani Chief Strategy Officer
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Jörg Eberhart akasarudzwa Chief Strategy Officer weLufthansa Group
Jörg Eberhart achatsiva William Wilms, akasarudzwa kuva Executive Board yeLufthansa Technik musi wa1 Gunyana 2021.
Lufthansa Boka rinozivisa kusarudzwa kwevakuru.
Nyowani Musoro weChirongwa & Kurongeka kweSangano rakatumidzwa.
Jorg Eberhart achatora chinzvimbo ichi munaNovember 1, 2021.
Musi waGumiguru 1, 2021, Jörg Eberhart, parizvino CEO weAir Dolomiti, achatora chinzvimbo che "Musoro weQhinga & Kurongeka kweSangano" kuLufthansa Group. Anozotora chigaro chaWilliam Wilms, akasarudzwa kuve Executive Board yeLufthansa Technik musi wa1 Gunyana 2021.
Jörg Eberhart akashanda semutungamiri uye CEO we Air Dolomiti kubvira 2014. Panguva ino, aive zvakare nhengo ye Executive Board yeLufthansa CityLine. Izvi zvisati zvaitika, akabata nzvimbo dzinoverengeka dzehutungamiriri pa Lufthansa Boka izvo zvaisanganisira kuve chikamu chekugadzwa kweAerologic GmbH uye kuitwa kweiyo SCORE chirongwa.
Jörg Eberhart akadzidza manejimendi manejimendi kuYunivhesiti yeTübingen uye ane rezinesi rekutyaira reAirbus A320.
Lufthansa Boka iboka rekubhururuka rine mashandiro pasirese. Iine vashandi 110,065, iro Lufthansa Boka rakagadzira mari yeEUR 13,589m mugore remari 2020.
Lufthansa Boka rinoumbwa nezvikamu Network Airlines, Eurowings uye Aviation Services.
Aviation Services ine zvikamu zveLogistics, MRO, Catering uye Yakawedzera Mabhizinesi uye Boka Mabasa.
Iyo yekupedzisira zvakare inosanganisira Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Kudzidziswa uye makambani eIT. Zvese zvikamu zvine chinzvimbo chinotungamira mumisika yavo.